IOfisi yaseKhaya ehlaziyiweyo yokuRekhoda kweVidiyo kunye nePodcasting | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Julayi 17, 2020 NgoLwesibini, Matshi 2, 2021 Douglas Karr
Xa ndangena kwiofisi yam yasekhaya kwiminyaka embalwa edlulileyo, bendinomsebenzi omninzi ekufuneka ndiwenzile ukuyenza indawo entle. Ndifuna ukuyilungiselela ukurekhodwa kwevidiyo kunye nepodcasting kodwa ndiyenze indawo efanelekileyo apho ndiyonwabela ukuchitha iiyure ezinde. Iphantse yalapho, ke bendifuna ukwabelana ngolunye lotyalomali endilwenzileyo nokuba kutheni.
Nalu ulwahlulo lohlaziyo endilwenzileyo:
bandwidth -Ndisebenzisa iComcast kodwa indlu yam yayingafakwanga zintambo ngoko ke bendihlala ndibaleka intambo ye-ethernet ukusuka kwi-router yam ukuya eofisini yam xa bendirekhoda ukuqinisekisa ukuba andinayo imiba ye-bandwidth. IComcast yayinesantya esihle sokukhuphela, kodwa isantya sokulayisha sasisoyikeka. Nditsale iplagi ndaya kwiFiber. Inkampani iyifakele ngqo eofisini yam, ke ngoku ndinenkonzo ye-1Gb zombini phezulu nangaphantsi ngokuthe ngqo kwilaptop yam! Lonke ikhaya ndinalo U-Eero Mesh wifi Inkqubo efakwe nefayibha yiMetronet.
Isikhululo soFakelo sokuBonisa esintathu -Endaweni yokudibanisa ngesandla i-ethernet, iimonitha, ihabhu ye-USB, imic, kunye nezithethi ngalo lonke ixesha ndihleli edesikeni yam, ndikhethe Yenza isikhululo sokumisa i-USB-C. Lunxibelelwano olunye kwaye sonke isixhobo sixhunyiwe ngaphakathi kubandakanya amandla.
Idesika emi -Kuba ngoku ndisiba semgangathweni, bendifuna ukubanokhetho lokuma kwaye ndinendawo ebanzi yokusebenza kuyo. Ndikhethe i IVaridesk… Eyakhiwe ngendlela emangalisayo, iyamangalisa, kwaye ilingana nayo yonke into ukuze ndikwazi ukuhamba ngokulula ndiye kuhlala phantsi. Sele ndinebracket yokubonisa emibini efake ngokulula kwidesika.
Imakrofoni -Ndiyazi abantu abaninzi bayamthanda uYeti, kodwa andinakukwazi ukucacisa kwimic mic. Isenokuba yayililizwi lam, andiqinisekanga. Ndikhethe i I-Audio-Technica AT2020 Cardioid Condenser Studio XLR imakrofoni kwaye iyavakala kwaye ibonakala intle.
XLR kwi-interface yomsindo we-USB -Imakrofoni yi-XLR, ke ndinayo Behringer U-PHORIA UMC202HD, 2-Isiteshi ujongano lomsindo ukuyityhalela kwisikhululo sokumisa.
Ingalo yePodcast -Iingalo zePodcast ezisezantsi ezibonakala zilungile kwividiyo zinokubiza kakhulu. Ndikhethe i IPodcast Pro kwaye ibonakala intle. Eyona mpazamo yam koku kukuba imakrofoni iphantsi kobunzima bokuba uxinzelelo lwengalo luyilelwe ngenxa yoko kuye kwafuneka ukuba ndenze i-counterweight engalweni ukuze ihlale izinzile.
Umnxeba we-Amp -Uyayazi indlela ekungekho ngqiqweni ngayo ukugcina okanye ukusombulula iziphumo zomsindo ngesoftware, ngenxa yoko ndakhetha i I-PreSonus HP4 4-Channel yecompact yoLungiso lweNtloko Endaweni apho ndineendlebe zentloko, istudio headphone, kunye nenkqubo yesandi esingqonge konke kudityanisiwe. Oku kuthetha ukuba imveliso yam ihlala ifana… ndijika nje phezulu okanye ezantsi zeziphi ii-headphone endizisebenzisayo okanye ndithule imveliso yokujonga.
Abathethi -Ndifuna iseti enkulu yezithethi zeofisi ezixhonyiweyo kwimveliso yokubeka esweni i-headphone amp, ndiye ndahamba Inkqubo ye-Logitech Z623 400 Watt Home Somlomo, i-2.1 Somlomo weNkqubo.
webcam -Umnye wemicimbi endandibalekela kuyo endithetha ngayo kwividiyo yayililitha eligqithisileyo ngekhamera yam yewebhu endala… ke ndiye ndanyusela kwi I-Logitech ye-BRIO eneenketho ezininzi zeetoni kwaye ijongana nelitha ngokungcono kakhulu - ungasathethi ke ngokuba ine-4K.
Uphuculo lwekhamera yeWebhu: I-Logitech BRIO
Inqaku elinye oza kulibona kwividiyo yoqobo kukuba ikhamera yewebhu yayisoyikeka ekujonganeni nelitha elivela kubahloli bam xa ndandineewindows ezinkulu ezimhlophe kwiscreen. Ndiyiphucule ikhamera yewebhu ibe I-Logitech ye-BRIO, I-webcam ye-4K ephezulu enesiphelo sokwenza ngokwezifiso kunye nokukhetha ukurekhoda. Ungazibona iziphumo ezingasentla.
Ukuseta kumnandi kwaye ndinomabonakude omnandi kunye nebar yesandi ecaleni kwam ukubukela imovie okanye ukumamela umabonwakude ngelixa ndisebenza.
tags: apileiteknoloji yeaudioisandiisikhululo sokumisaizixhoboFiberofisi yasekhayaistudiyo sasekhayastudio sekhayaintanethilive iofisi yasekhayaIMacBook proisisekoingalo yemakrofoni boomipodcast proNgqoideskiti emileyoi-USBumvaiwebcam
Imizekelo emi-5 yeePop-up eziNokuphuma eziya kuphucula amaRhafu akho okuGuqula